तिथि मेरो पत्रु » खुला नाता काम गर्न कसरी
जान्छ ब्रुक फ्रेजर गीत देखि एक लाइन छ "वास्तविक प्रेम कडा प्रेम छ". यो बढी उपयुक्त हुन सक्दैन. मिल्स विपरीत & Boons रोमान्टिक उपन्यास वा डिज्नी चलचित्र, सम्बन्ध सधैं दम्पतीले सूर्यास्त मा बन्द चढेर संग अन्त छैन. के प्रेम को घोषणाहरूमा पछि आउछ प्रयास र प्रतिबद्धता छ. मानिसहरूले अक्सर पूर्णता को लागि प्रयास तर यो चाँडै पुराना प्राप्त गर्न सक्छन्. जीवन सबै निहित नाटक सामना बिना पर्याप्त जटिल छ. मात्रा को अन्य पक्ष मा, डेटिङ वा अन्य मानिसहरूलाई देखेर गर्न खुला छन् जो सम्बन्ध मा मान्छे छन्. शब्द "खुला सम्बन्ध" अब केहि समय को लागि बारेमा bandied गरिएको छ जबकि, सम्बन्ध यस प्रकार के entails स्पष्ट परिभाषा अधिकांश मान्छे को लागि भ्रामक रहिरहन्छ.
ठ्याक्कै खुला नाता के हो?
केही खुला सम्बन्ध मा भएको मान्छे जोडी अपेक्षालाई को वजन र एकै जनासित मात्र विवाह प्रतिबद्धता बिना संलग्न हुने स्वतन्त्रता र लचकदार दिन्छ तर्क. अरूले यो साझेदार प्रत्येक अन्य धोखा लागि अनुमति दिने बस एक कल्पना तरिका हो भनेर opine. जे राय छ, व्यवस्थित र राम्रो ह्यान्डल गर्दा खुला सम्बन्ध काम गर्छन् भनेर देखाउन स्पष्ट संकेत छन्. अन्य सम्बन्ध जस्तै, यो सबै प्रत्येक व्यक्ति चाहनुहुन्छ निर्भर. स्पष्ट छ, सम्बन्ध यी प्रकार छन् जो मानिसहरू वेदना को विभिन्न प्रकार सामना खतरामा छन्. विवाही सम्बन्ध मा साझेदार विपरीत, खुला सम्बन्ध हुनेहरू "त्यो / त्यो मलाई छल्न खोजेको" कार्ड नजिक को विकल्प छैन. त्यसैले कसरी एक खुला सम्बन्ध एक सफल र चिरस्थायी छ भनेर सुनिश्चित बारे मा जाने गर्छ?
साधारण लक्ष्य र प्रतिबद्धता
शुरुवात को लागि, आकर्षण हुनुपर्छ - शारीरिक र भावनात्मक दुवै - दुवै दल बीच. आखिर, तिनीहरूलाई को दुवै पहिलो स्थानमा सँगै हुन्छन् किन कि मुख्य कारण हुनेछ. तिनीहरूले छोडेर जसरी किनभने दुई व्यक्तिहरू आफ्नो तरिका आपसमा वचनबद्ध गर्ने फैसला गरेको छ भन्ने तथ्यलाई देखि पटरी हुँदैन अन्य रुचि पक्षहरूसँग खोज गर्न खोल्न. यस आकर्षण देखि काम, खुला सम्बन्ध लागि निर्णय बस उनलाई को दुवै अन्य विकल्प खोज अझै इच्छुक छन् कि हुन सक्छ. त्यसैले, खुला सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएको दुवै दल खेल को "नियम" बुझ्न सुनिश्चित को कुरा हो. एक विशिष्ट विवाही सम्बन्ध जस्तै धेरै, खुला सम्बन्ध मा ती साथै आफ्नै स्तर हुनेछ. एक सफल खुला सम्बन्ध नुस्खा दुवै दल समझ भएको र त्यही नियम सुम्पिदिनुभयो छ.
इमानदारी लामो बाटो
जीवनमा जस्तै, इमानदारी खुला सम्बन्ध एक ठूलो भाग हो. आखिर, खुला सम्बन्ध आधार दलहरूबिचको स्वस्थ भरोसा छ भन्ने तथ्यलाई छ. दुवै सधैं अन्य साँचो हो भने यो काम गर्न सक्छन् भन्ने मात्र बाटो हो. यो अपेक्षालाई प्रबन्धको बारेमा पनि छ. खुला सम्बन्ध मा भएको चारैतिर देख्न सम्बन्ध अन्य प्रकार धेरै समान छ. लामो समय को रूप दुवै पार्टीहरूले आफ्ना सम्बन्ध गतिशीलता हुनजान्छ के मा राजी छन् र लगातार यो सामान्य लक्ष्य तिर काम गर्न सक्षम छन् रूपमा, खुला सम्बन्ध लामो यात्रा पछिल्लो छैन किन कुनै कारण छैन. एक सफल खुला सम्बन्ध मा एक महत्वपूर्ण घटक सिर्फ यो छ: प्रत्येक व्यक्ति यो बाहिर के आशा गर्नुहुन्छ? यस पङ्क्तिबद्धता मा छ भने, खुला सम्बन्ध जान सेट छ.
निस्सन्देह, खुला सम्बन्ध सबै को लागि छैन. बस सम्बन्ध अन्य प्रकार जस्तै, यो भावनात्मक चोटबाट मा अन्त गर्न सक्छन्. तथापि, यो पनि एकै समयमा अरूलाई पूरा गर्न पाएकोमा गर्दा स्थिर साथी संग रमाउँछु मानिसहरूलाई विशेष गरी एक धेरै उपयोगी सम्बन्ध उपकरण हुन सक्छ. खुला सम्बन्ध opine सक्छ थुप्रै प्रतिबद्धता र प्रेमको साँचो अर्थ को धेरै आधार विरुद्ध जाने. तथापि, खुला सम्बन्धमा साझेदार साँच्चै मिति गर्न चयन वा अन्य मानिसहरूलाई भेट्न छैन जसबाट अवस्थामा पनि छन्. खुला सम्बन्ध मा सफलता पाउन गर्नेहरूले अक्सर वास्तव मा आफ्नो साझेदार नजिक तिनीहरूलाई खिच्छ मिति अरूलाई स्वतन्त्रता पाइरहेका पत्ता. सम्बन्ध चाबी वास्तवमा आपसी समझ मा आधारित साँच्चै एक तिनीहरूलाई धारण भनेर लेबल तर सही निर्णयहरू गर्न प्रत्येक पार्टी को क्षमता छैन.